Nnukwu Mgbanwe na Bluelock | Martech Zone
Nnukwu Mgbanwe na Bluelock
Saturday, December 22, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Izu ole na ole gara aga, amalitere m ịgụ The Big Switch by Nicholas Carr. Nke a bụ ihe si na saịtị ahụ nke nwụrụ na:
Otu narị afọ gara aga, ụlọ ọrụ kwụsịrị ịkwụsị ikike nke aka ha na injin ụgbọ mmiri na ike ma banye na ntanetị eletrik ọhụrụ. Ike dị ọnụ ala nke ndị ọrụ eletrik na-amịpụta agbanweghị etu azụmaahịa si arụ ọrụ. O setịpụrụ usoro mgbanwe nke mgbanwe akụ na ụba na nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke wetara ụwa nke oge a. Taa, mgbanwe yiri ya na-ewere ọnọdụ. Gaa na ntanetị ntanetị nke Intanet, nnukwu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ihe ọmụma amalitela ịmịnye data na koodu ngwanrọ n'ime ụlọ na azụmahịa anyị. Oge nke a, ọ na - eme ihe atụ na - abawanye uru.
Mgbanwe a na-emezigharị ụlọ ọrụ kọmputa ahụ, na-eweta ndị asọmpi ọhụrụ dịka Google na Salesforce.com na-eyi egwu na ndị na-eyi egwu dị ka Microsoft na Dell. Ma nsonaazụ ya ga-eru n'ihu karịa. Onu ahia, ntinye nke ihe bara uru ga - agbanwe obodo dika ocha dika oku eletrik. Anyị nwere ike ịhụrịrị mbido mbụ? na ngbanwe nke ịchịkwa mgbasa ozi site na ụlọ ọrụ gaa na ndị mmadụ n'otu n'otu, na arụmụka banyere uru nzuzo, na mbupụ nke ọrụ ndị ọrụ ihe ọmụma, ọbụlagodi na akụ na ụba na-eto eto. Ka ụlọ ọrụ ihe ọmụma na-abawanye, mgbanwe ndị a ga-agbasawanye, na usoro ha ga-eme ọsọ.
Nnukwu mgbanwe ahụ bụrịị eziokwu. Na Jenụwarị, Okporo ụzọ na-ebugharị akụrụngwa mmepụta anyị Bluelock. Ọ bụ ụwa ọhụrụ (dị ka mgbasa ozi na-ekwu na sidebar).
Ọ bụ otito zuru oke maka sọftụwia dịka Ọrụ (Saas). Companieslọ ọrụ SaaS m rụworo ọrụ na-agbadoro akpịrịkpa na ngwaike na ndị otu iji kwado ha. Bluelock bụ azịza ziri ezi nye anyị ebe ọ bụ na anyị nwere ike ịmalite azụmaahịa anyị n'echeghị gbasara akụrụngwa anyị ma ọ bụ nnukwu akụ na-eso ya. Ọ bụ outsourcing na-echegbu onwe!
Akụrụngwa dị ka Ọrụ (IaaS) bụ ụdị azụmaahịa na-apụta nke na-enye gị ohere ịzụta ihe IT site n'aka onye na-eweta IaaS dị ka ụgwọ a na-akwụ kwa ọnwa. Na IaaS, kama ịzụta ikpo sava na SAN, ị nwere ike ịgbazite ihe ntanetị isii, terabytes abụọ na nchekwa na gigabytes iri isii na anọ ma kwụọ ụgwọ ya kwa ọnwa ma ọ bụ kwa ọnwa. Ọnọdụ a bụ ihe Nicholas na-agwa okwu n'akwụkwọ ya. Anyị na-azụta bandwidth, ohere diski na ike nhazi dị ka a ga - asị na anyị na - azụ ihe ọ bụla ọzọ.
Imirikiti ndị na-ere ahịa IaaS na-agba ọsọ VMWare ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ yiri nke a karịa ka emee ka emee ya. Usoro sistemụ a bụ ihe dị mkpa iji tinye shim n'etiti ihe ngwaike na gburugburu gị nke na-enye ya ohere ịba ụba, na-agagharị, na-emegharị ya, wdg. Ọ bụkwa ihe na-eme ka onye na-eweta IaaS dị iche na onye na-eweta ọrụ ọdịnala ma ọ bụ ụlọ ọrụ nnabata.
Anyị na-eme The Big Gbanye site na njedebe nke Jenụwarị. Bulie otu akwụkwọ ma nye Bluelock oku.
PS: Nke a abughi nkwado… naanị ihe m chọrọ ịkọrọ n'ihi na enwere m nnukwu obi ụtọ maka ịgagharị!
Tags: ebumnucheọkụỌrụ 1981kim dotcommegauploadsakwa nhichaokpupairetipaireti mmirina-ezu ohi
Ekwela ka Cigna gbue Ọnwụ
Zipu Ozi Ezumike nye ndị agha ahụ!
Dee 23, 2007 na 12: 14 AM
Mana BlueLock dị ka onye nkwado saịtị
Ka o sina dị, gịnị mere ị ga-eji kwuo BlueLock ma kwuo banyere EC2, S3, na SimpleDB nke Amazon?
Dee 23, 2007 na 11: 31 AM
Bluelock anaghị akwụ ụgwọ maka ọkwa ma ọ bụ ebe nkwado. M na-enye ụfọdụ ndị enyi m na ndị ọrụ ibe m ego mgbe ụfọdụ. Ikekwe m ga-akpọ ya "Enyi & Ndị Nkwado".
Bluelock nọkwa ebe a na Indiana - ị ga - ahụ na m gbalịrị inyere ndị Indiana mmalite na ụlọ ọrụ teknụzụ aka.
Ọrụ Amazon abụghị Akụrụngwa dịka Ọrụ, ha bụ Ọrụ Weebụ. Ihe dị iche bụ na gburugburu ebe m anaghị adọta site na 'igwe ojii' (okwu Amazon) ebe a na-ekerịta gburugburu ma ọ bụ narị puku ndị ọzọ.
Na Bluelock anyị ga-enwe sava raara onwe ya nye, ohere diski, ndị nhazi na bandwidth. Anyị nọ na gburugburu ebe obibi dị mma - yabụ na anyị nwere ike ịmegharị gburugburu anyị mgbe ọ dị mkpa.
Anyị ekwe nkwa na SLA, Industrylọ Ahịa Ahịa Nmezu, firewalls, nchọpụta intrusion, ịnweta njikwa, 24/7 nlekota na nkwado, nkwado ndabere na mpaghara, ike na-enweghị isi… ị na-akpọ ya.
Nwere olileanya na-enyere aka! Lee Bluelock n'ihi na ozi ndị ọzọ.
Dec 23, 2007 na 12:05 PM
Mgbe glowing gị nyocha, ma eleghị anya, BlueLock kwesịrị ị na-akwụ ụgwọ nkwado… 😉
@Douglas: Inyere Indiana
Aghọtara m, m na-eme otu ihe ahụ na Atlanta, GA (lee http://web.meetup.com/32/)
@Douglas: Amazon abụghị ọrụ akụrụngwa
Ọ bụ ezie na ọ bụghị n'otu ọkwa nke BlueLock, ma ọ bụ EC2 abụghị akụrụngwa?
Dee 23, 2007 na 11: 20 AM
@Mike E nwere ihe jikọrọ n'etiti onyinye nke Amazon EC2 / S3 / SimpleDB na BlueLock. Mana n'ikwu okwu n'ozuzu, ha bụ azịza dị iche iche dị iche iche, ma zube ndị na-ege ntị dị iche iche.
Nweghị ike ịtọlite ​​ụyọkọ Amazon na-enweghị ezigbo ihe ọmụma nke teknụzụ, ọ ga-adị mkpa ka ị rụpụta ihe iji jikwaa ọnọdụ EC2 dị iche iche. Na-abanye n'ọtụtụ nsogbu ga-adị mkpa iji dozie ya na ngwa ahụ, dị ka eziokwu ahụ bụ na oge EC2 enweghị IP IP, na enweghị nchekwa mpaghara na EC2 dịka, na nchekwa S3 dị nwayọ karịa SAN ma ọ bụ Mpaghara disk, na SimpleDB anaghị anabata ajụjụ SQL ma ọ bụ kwe ka njikọ dị mgbagwoju anya. EC2 na SimpleDB ka nọ na beta ugbu a (yana nke ikpeazụ na beta), yabụ enweghị SLA - ọ bụghị ihe ị ga-achọ ịdabere na azụmahịa gị dị oke mkpa.
BlueLock na-enye gị ntinye ngbanwe maka oke nke sava Windows na / ma ọ bụ Linux na-enweghị isi ọwụwa nke ijikwa ha, ma ọ bụ mezue ngwa gị ka enwere ike ịnabata ya na Amazon. Ga-enweta nkwanye ndị injinia nkwado na ekwentị.
Nke ahụ kwuru, Amazon dị oke ọnụ karịa ịmalite, na BlueLock nwere ike ọ gaghị adị ọnụ ahịa ma ọ bụrụ na ị na-agba naanị sava di na nwunye. Ọ bụkwa ịkwụ ụgwọ-dị ka ojiji, ebe ọnụahịa BlueLock dị ka ebe data ọdịnala ebe ị na-edozi atụmatụ ịkwụ ụgwọ maka ụfọdụ cpu / disk / bandwidth / wdg ma ị na-eji ya niile kwa ọnwa.
Disclaimers: Amaara m mmadụ ole na ole na-arụ ọrụ na BlueLock. Mana m na-eji Amazon S3 eme ihe na mmepụta, abụ m onye ofufe EC2 (n'okwu ikpe ziri ezi), ma na-atụsi anya ike ịnabata beta beta nke SimpleDB.
Dec 23, 2007 na 12:08 PM
Daalụ maka ihe Ade. Aga m ajụ Douglas ka o dee post na-atụnyere ma na - egosipụta BlueLock na ọrụ ntanetị dị na Amazon mana ọ dịghị mkpa ugbu a dịka ị mere!
PS Indimụ India ị na-arapara ọnụ, doncha? 🙂
Dec 23, 2007 na 12:21 PM
Ha! Ee anyị ji n'aka, Mike!
Ọ bụ otu n'ime mpaghara ndị pere mpe nke na enwere ogo pere mpe nkewa n'etiti ụlọ ọrụ 2 ma ọ bụ ndị mmadụ. Anyị na-agbasi mbọ ike ime ka mmekọrịta ndị a sie ike ma haziekwa mpaghara.
Ọ bụ mpaghara zuru oke ịmalite ụlọ ọrụ ntanetị ebe ọ bụ na ọnụ ahịa obibi na uru ụtụ dị mma. Tụnyere mba, ọ bụ 20% na-erughị na-eri na nkezi. Nke ahụ bụ okwu anyị kwesịrị ịpụ! Omume MidWest maka ịrụsi ọrụ ike na nnukwu ọrụ bụ nnukwu ihe dị iche.
Obere Indiana bụ netwọkụ mmekọrịta ọhụụ amalitela iji hazie azụmaahịa dị na mpaghara ka mma.
PS: Obi dị m ụtọ na Ade banyere. Anyị na-aga Bluelock ka m wee mata esemokwu dị iche iche 😉
Dec 23, 2007 na 12:42 PM
@Douglass: Ọ bụ mpaghara zuru oke ịmalite ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ ebe ọnụ ahịa obibi na uru ụtụ dị mma. Tụnyere mba, ọ bụ 20% na-erughị na-eri na nkezi. Nke ahụ bụ okwu anyị kwesịrị ịpụ! Omume MidWest maka ịrụsi ọrụ ike na nnukwu ọrụ bụ nnukwu ihe dị iche.
Ma mgbe ahụ, ị ​​ga-ebi Indiana godforbid…. (ndo, enweghi ike iguzogide '-)
Agbanyeghị, dị ka ị kwesịrị ịga na-akpọ Chamberlọ Azụmaahịa dị ka onye ọzọ ga-akwado gị… 🙂
Dec 23, 2007 na 1:55 PM
Daalụ maka Mgbakọ dị ka ịba uru. Ọ na-eme ọtụtụ echiche ma na-etinye IaaS ozugbo. Enwere m ekele maka post ahụ ọbụlagodi ọgwụgwọ pụrụ iche maka Bluelock :).
Ezigbo post Doug.
Obi ụtọ na ezumike niile.